Dulmarka alaabta - MDF - MimoWork
Dharka & Dharka Guriga
Xayeysiinta & Hadiyadaha
Gooyaha Laser Flatbed
Calaamadeeyaha Laser GALVO
Dijital Laser Die Cutter
Mimo Contour Nidaamka Aqoonsiga
Nidaamka Aqoonsiga Kamarada CCD
Nidaamka Iswaafajinta Template
Soo saarista qiiqa
La-taliyaha Nidaamka Laser-ka
Ku saabsan MimoWork
Dayactirka & Daryeelka
Dulmarka alaabta - MDF
Laydhka Goynta MDF
Waqtigan xaadirka ah, dhammaan walxaha caanka ah ee loo isticmaalo alaabta guriga, albaabbada, armaajooyinka, iyo qurxinta gudaha, marka lagu daro alwaax adag, walxaha kale ee loo isticmaalo waa MDF. Maadaama MDF laga sameeyay nooc kasta oo alwaax ah iyo habaynteeda hadhaaga iyo fiilooyinka dhirta iyada oo loo marayo hannaan kiimiko, waxa lagu soo saari karaa tiro badan. Sidaa darteed, waxay leedahay qiimo ka wanaagsan marka loo eego alwaax adag. Laakiin MDF waxay yeelan kartaa adkaysi la mid ah sida alwaax adag oo leh dayactir habboon.
Waxayna caan ku tahay hiwaayadaha iyo ganacsatada iskood u shaqeysta ee isticmaala MDF si ay u sameeyaan calaamado magacyo, nalal, alaab guri, qurxiyo, iyo waxyaabo kaloo badan.
Waa maxay sababta aad u habaynayso laysarka MDF:
Si looga fogaado Khatartaada Caafimaad:
Maadaama MDF ay tahay shay dhisme oo ka kooban VOC-yada (tusaale. urea-formaldehyde), boodhka ka dhasha xilliga wax-soo-saarka ayaa waxyeello u geysan kara caafimaadkaaga. Xaddi yar oo formaldehyde ah ayaa laga yaabaa in laga saaro-gaas iyada oo loo marayo hababka goynta caadiga ah, markaa tallaabooyinka ilaalinta ayaa loo baahan yahay in la qaado marka la jarayo oo la ciidayo si looga fogaado in la neefsado qaybaha. Maaddaama goynta laysarka uu yahay farsamaynta aan xidhiidhka lahayn, waxay si fudud uga fogaataa boodhka alwaax. Intaa waxaa dheer, hawo-qaadashada qiiqa maxalliga ah ayaa soo saari doonta gaaska soo saara qaybta shaqada oo ay dibadda u soo saari doonto.
Si loo gaaro Tayada Goynta ka Wanagsan:
Goynta laser-ka MDF waxay badbaadisaa wakhtiga dhogorta ama xiirashada, maadaama laysku yahay daawaynta kulaylka, waxay bixisaa si siman, gees-goynta-free-burr ah iyo nadiifinta si sahlan goobta shaqada ka dib marka la farsameeyo.
Si aad u hesho dabacsanaan badan:
MDF caadiga ah waxay leedahay fidsan, siman, adag, oogada. waxay leedahay awood laser heer sare ah: iyada oo aan loo eegayn jarista, calaamadaynta ama xaradhka, waxaa lagu farsamayn karaa qaab kasta, taasoo keentay dusha siman oo joogto ah iyo saxnaanta sare ee faahfaahinta.
Agabka la xidhiidha:
Qoryo, alwaax, warqad, filimaan
Sidee MimoWork kuu caawin kartaa?
Si loo dammaanad qaado in nidaamka laysarkaagu uu ku habboon yahay qalabkaaga iyo codsigaaga, waxaad la xidhiidhi kartaa MimoWork si aad u hesho la-talin dheeraad ah iyo ogaanshaha.
Waxaan nahay lammaanahaaga laysarka gaarka ah!
Nala soo xidhiidh wixii su'aal ah, la tashi ama xog wadaag ah
Alaabtaada Laysarka Aaminsan
No.840 Chengliu Hwy, Degmada Jiading, Shanghai, Shiinaha
alaabta ugu sareysa
Calameeyaha Galvo Laser